ch4မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch4မာကု
4:1 တဖန်တုံ, he began to teach by the sea. Andagreat crowd was gathered to him, ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်, climbing intoaboat, he was seated on the sea. And the entire crowd was on the land along the sea.
4:2 And he taught them many things in parables, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, in his doctrine:
4:3 "Listen. အကယ်, the sower went out to sow.
4:4 ထိုမင်းသည်မျိုးစေ့ကြဲခဲ့စဉ်, some fell along the way, နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် လာ. စား.
4:5 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, others fell upon stony ground, where it did not have much soil. And it rose up quickly, because it had no depth of soil.
4:6 And when the sun was risen, it was scorched. And because it had no root, ဒါကြောင့်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်.
4:7 ထိုအခါအချို့တို့သည်ဆူးပင်တို့တွင်ကျဆင်း. And the thorns grew up and suffocated it, and it did not produce fruit.
4:9 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "သူမည်သည်ကားကိုနားထောငျဖို့နားရွက်ရှိပါတယ်, ကြားပါစေ။ "
4:11 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သင့်ဆီ, it has been given to know the mystery of the kingdom of God. But to those who are outside, everything is presented in parables:
4:12 ‘so that, ကိုမြင်လျှင်, they may see, and not perceive; နှင့်ကြားနာမှု, they may hear, and not understand; lest at any time they may be converted, and their sins would be forgiven them.’ ”
4:13 ထိုသူတို့အားဆို၏: “Do you not understand this parable? ဆိုတော့, how will you understand all the parables?
4:16 နှင့်အလားတူ, there are those who were sown upon stony ground. These, when they have heard the word, immediately accept it with gladness.
4:21 ထိုသူတို့အားဆို၏: “Would someone enter withalamp in order to place it underabasket or underabed? Would it not be placed uponalampstand?
4:23 If anyone has ears to hear, ကြားပါစေ။ "
4:24 ထိုသူတို့အားဆို၏: “Consider what you hear. With whatever measure you have measured out, it shall be measured back to you, and more shall be added to you.
4:25 ရှိပါတယ်သောသူသည်, to him it shall be given. And whoever has not, from him even what he has shall be taken away.”
4:26 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: “The kingdom of God is like this: it is as ifaman were to cast seed on the land.
4:27 And he sleeps and he arises, နေ့ညဉ့်. And the seed germinates and grows, though he does not know it.
4:30 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: “To what should we compare the kingdom of God? Or to what parable should we compare it?
4:35 ထိုနေ့၌, ညဦးယံအချိန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, သူတို့ပြောဆို, "ကျွန်တော်တို့ကိုကူးကြကုန်အံ့။ "
4:36 ထိုအခါလူအစုအဝေးထှကျသှားစပွေီး, သူတို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏, သူတဦးတည်းလှေ၌ရှိ၏နိုင်အောင်, နှင့်အခြားလှေသူ့ကိုနှင့်အတူရှိ.
4:37 ထိုအခါလေကြီးမုန်တိုင်းဖြစ်ပွား, နှင့်လှိုင်းတံပိုးကိုလှေကူးဖဲ့, လှေဖြည့်ခံခဲ့သည်နိုင်အောင်.
4:38 သူသည်ထိုအလှေ၏ပဲ့ခဲ့, တစ်ခေါင်းအုံးပေါ်အိပ်ပျော်နေသော. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုနှိုးခြင်းနှင့်ကလညျး, "အရှင်ဘုရား, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသင်တို့ကိုမဆိုင်ပါဘူးပါဘူး?"
4:39 ထ, သူသည်လေကိုဆုံးမတျောမူ, သူသည်ပင်လယ်မှဆိုပါတယ်: "ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း. ။ ပျောက်ရပါ "ထိုအခါကိုလေစဲခံရ. ထိုအခါအကြီးအပဿဒ္ဓိဖြစ်ပွားခဲ့သည်.
4:40 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သင်အဘယ်ကြောင့်ကြောက်လန့်? သင်ဆဲယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကင်းမဲ့သလား?"ထိုအခါသူတို့တစ်တွေအလွန်ကြောက်လန့အတူလုပ်ကြံခံခဲ့ရ. ထိုသူတို့အချင်းချင်းကပြောပါတယ်, "သင်သည်ဤသူကားအဘယ်သူထင်လဲ, လေနှင့်ပင်လယ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးသူ့ကိုနားထောင်သော?"